काठमाडौं उपत्यकामा जताततै भिडभाड मात्र जोगिने कसरी?? | AbcSanchar.com
काठमाडौं उपत्यकामा जताततै भिडभाड मात्र जोगिने कसरी??
प्रकशित मिति : ४ असार २०७७, बिहीबार १०:५८
काठमाडौं राजधानीका पहिलाका व्यस्त बजार जानुहोस्- लाग्छ, अहिले देशमा कोरोना महामारी छ र ? जताततै भीडै भीड छ। चोक-चोकमा बन्द गरिएका ट्राफिक लाइट खोलिएका छन्। सवारी जाम सुरु भइसकेको छ। सडकपेटीमा पैदलयात्रुको चाप छ।
अर्कातिर देशमा कोरोना संक्रमण प्रत्येक दिनजसो बढ्दो गतिमा छ। यससँगै चुनौती थपिएको छ-अब जोगिने कसरी ?
सडकमा हिँड्नेको चाप पनि बढेको देखियो। किनमेलमा आउनेभन्दा हिँडडुल गर्ने धेरै भएको पसले बताउँछन्।अन्नपूर्णपोस्टबाट